LOTTE HOTEL REWARDS ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ လိုတေးလ်ဟိုတယ်များမှ ရရှိနိုင်သော ခံစားခွင့်များဖြင့် ပြီးပြည့်စုံစွာနေထိုင်နိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
GREEN TRAVELER'S GUIDE ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ရှေ့ဆောင်နေပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
Room Packages & Offers ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
LOTTE HOTELS မှ ပေးထားသော အကျိုးခံစားခွင့် အမျိုးမျိုးကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။
သင်ဟိုတယ်တွင် အနားယူချိန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က နံနက်စာ ပါဝင်သော တည်ခင်းမှုများကို ပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။
LOTTE HOTEL REWARDS သီးသန့်
REWARDS အဖွဲ့ဝင်များအတွက် သီးသန့်စျေးနှုန်းဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ LOTTE HOTELS & RESORTS တွင် အခန်းများကို ရှာဖွေပါ။
SIGNIEL မှ သင်မျှော်လင့်ထား သည်များ အားလုံးထက် ပိုမိုမြင့်မားသော အရည်အသွေးကို ပေးအပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှ သင်ရှာဖွေ မတွေ့နိုင်သ
အထက်တန်းကျကျ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ် လျက်ရှိသည်။SIGNIEL ၌ နေထိုင်၍ သင့် ဘဝ၏ အခမ်းနားဆုံးသော အထူး အခွင့်အရေးများဖြင့် ရယူခံစားလိုက်ပါ။ သင်၏နေ
LOTTE HOTEL သမိုင်းကြောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဧည့်သည်များအတွက် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းနှင့် လေးစားမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ LOTTE HOTEL များမှ ဧည့်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စိတ်ကျေနပ်အားရမှုများနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
L7 HOTEL သည် စတိုင်ကျခေတ်မီသည့် ဟိုတယ်တစ်လုံး ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု ဖန်တီးသူများ နှင့် ၂၀ ရာစု လူလတ်ပိုင်းများအတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်များ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အရာရာတိုင်းကို စိတ်ကြိုက်တွေ့စေမည့် ဒီဇိုင်းများအတိုုင်း ဖန်တီး ထားပါသည်။ LOTTE City Hotel ၏ ခေတ်မှီသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စတိုင်လ်ကျသည့် ဧည့်သည်အခန်းများဖြင့်ဆိုလျှင် ယခုအထိသင် အိမ်မက်မက်စိတ်ကူးထားသော သင်၏ အဆင်ပြေချောမွေ့သည့် လုပ်ငန်းခရီးစဉ်များကို သင်လုပ်ဆောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
LOTTE HOTEL SEOUL LOTTE HOTEL SEOUL, Korea's premier luxury business hotel, boasts 1,015 rooms and is located in Sogong-dong, Seoul. The hotel’s optimal location makes it easily accessible from Seoul’s major sightseeing spots such as Myeong-dong, Euljiro, and Cheonggyecheon. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL YANGON လိုတေးလ်ဟိုတယ် ရန်ကုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် အထင်ကရအထိမ်းအမှတ် နေရာတစ်ခု ဖြစ်သော ရွှေတိဂုံဘုရား၏ မြောက်ဘက်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ပျော်ပွဲစားထွက်ရန် အထင်ကရ အဖြစ်ဆုံး ဟိုတယျ site ကို Go
SIGNIEL SEOUL SIGNIEL SEOUL is the first luxury landmark hotel representing Korea and is operated by LOTTE HOTELS & RESORTS, the country’s biggest hotel group that boasts of halfacentury’s expertise and premium services. ဟိုတယျ site ကို Go
SIGNIEL BUSAN SIGNIEL BUSAN isa260-room luxury hotel located in the LCT Tower,alandmark in Haeundae. As the second hotel from SIGNIEL following SIGNIEL SEOUL, SIGNIEL BUSAN provides the perfect journey to enjoy true relaxation with fantastic ocean views of Haeundae, Busan. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL WORLD LOTTE HOTEL WORLD isaresort-style business hotel located in Jamsil in Gangnam, Seoul with convenient and easy access to downtown. The hotel is near LOTTE World Adventure, one of the world's largest indoor theme parks, and connected directly to LOTTE World Mall. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL BUSAN As the largest hotel in Busan, it provides elegant services and as many as 650 rooms that guests can choose freely according to their needs. Also, our renovated modern-style rooms and dining spaces will present customers with unforgettable and impressive moments. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL JEJU LOTTE HOTEL JEJU, located inaperfect spot where the blue sea surrounding the island blends perfectly with the blue sky above, isaleading hotel in South Korea where you can enjoy some heavenly rest and many activities during your trip. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL ULSAN LOTTE HOTEL ULSAN, located in the new downtown of South Korea`s premier industrial city Ulsan, offers the best options to satisfy your travels including business trip and sightseeing. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL SEATTLE LOTTE HOTEL SEATTLE, where the present and the past coexist, has become another attraction of downtown Seattle. The hotel houses The Sanctuary, America’s first United Methodist Church. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL GUAM LOTTE HOTEL GUAM, where luxury and elegance greet you the instant you step inside. This splendid5star hotel sits on beachfront prime property with gorgeous views of Tumon Bay Beach. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL MOSCOW The luxurious LOTTE HOTEL MOSCOW, located on Novinskiy Boulevard, in the very heart of Moscow, opened in September 2010. During this time, LOTTE HOTEL has earned numerous prestigious international awards and gained the recognition of travelers around the world. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL ST.PETERSBURG LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG features 150 elegant rooms, decorated in classic and contemporary styles. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL VLADIVOSTOK LOTTE HOTEL VLADIVOSTOK is the first and only executive class hotel withacombination of all international standards and hospitality rules in the Primorsky Territory. Since it was open in 1997, it has been the center of most of Vladivostok's major economic, political and social events. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL SAMARA LOTTE HOTEL SAMARA is the third hotel in Russia owned by the South Korean chain LOTTE HOTELS & RESORTS. The hotel has 193 elegantly designed rooms. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL SAIGON LOTTE HOTEL SAIGON, the most beloved 5-star hotel in Ho Chi Minh City, combines natural beauty and sheer opulence to provide the best for the discerning traveler. The breathtaking resort-setting and its distinctive architectural interior givesafeeling of luxury and tranquility. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE HOTEL HANOI Situated in the upper part of the magnificent 65th floor Lotte Center, LOTTE HOTEL HANOI proudly representsanew standard of international 5-star hotels. ဟိုတယျ site ကို Go
L7 MYEONGDONG L7 MYEONGDONG isalifestyle hotel with trendy sentiments andacozy atmosphere. It isawelcoming place in the heart of the city that blends customers` lifestyles with the local culture to createanew culture. ဟိုတယျ site ကို Go
L7 GANGNAM Gangnam,abrilliant and popular spot that resemblesafashion runway. Located at the center of Gangnam, Seoul, L7 isalifestyle hotel that reflects the sensual culture of the city. You can easily experience all the trendiest things in Seoul as easily as if you were flipping through TV channels. ဟိုတယျ site ကို Go
L7 HONGDAE L7 HONGDAE isadelightful cultural station, filled with chic and artistic individuals, that turns the mediocrity of an ordinary day intoafestivity. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Mapo LOTTE City Hotel Mapo isaroom-specific premium business hotel for both business travelers and tourists staying in Seoul. It has an advantage of using very convenient public transportations and has an easy access to downtown Seoul and tourist attractions within the city. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Gimpo LOTTE City Hotel Gimpo Airport is directly connected to LOTTE MALL Gimpo Airport with easy access to Incheon International Airport and downtown Seoul within 40 minutes. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Guro LOTTE City Hotel Guro is an upscale business hotel located in Guro Digital Complex,alandmark in the southwest of Seoul andamecca of Korea’s IT industry. The 20-story building features 287 elegant guest rooms commandingaspectacular view of the city. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Myeongdong LOTTE City Hotel Myeongdong is located between Myeongdong, the business and shopping center of Seoul, and Cheonggyecheon, an oasis in the downtown area. The 27-storey building boastsaspectacular view of the Seoul city. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Jeju LOTTE City Hotel Jeju, the highest building in Jeju, takes motifs from the best features of Jeju Island, such as Jusangjeolli, Cheonjiyeon and Jeongbang waterfalls and Dolharubang. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Ulsan The hotel offers 345 guest rooms which is the largest in Ulsan. It isabusiness hotel catering to both business travelers and tourists thanks to its vicinity of the financial district, shopping town, airport and bus terminal. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Daejeon LOTTE City Hotel Daejeon opened in March 2014 in Daejeon, where it’sahub of R&D and education in the Northeast Asia,amecca of advanced science and technology, and the Silicon Valley of South Korea. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE City Hotel Tashkent Palace LOTTE City Hotel Tashkent Palace, built in 1958 and has been designated as Uzbekistan`s cultural heritage, is an appealing hotel with classical appearance. ဟိုတယျ site ကို Go
LOTTE ARAI RESORT LOTTE ARAI RESORT awaits you amidstascenic landscape of mountains, stretching outward to the ocean from Mt. Myoko, andabroad expanse of countryside. ဟိုတယျ site ကို Go
အာရှတွင်သာမက နိုင်ငံတကာသို့ပါ ခြေဆန့်၍ လုပ်ငန်းများလည်ပတ်လျက်ရှိသော နာမည်အကြီးဆုံး ကိုရီးယားဟိုတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် LOTTE HOTELS & RESORTS သည် ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းတွင်ရော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းပိုင်းတွင်ပါ အလုံးစုံ ထူးကဲမှုဖြင့် ဧည့်သည်တော်များ၏ မျှော်မှန်းချက်များထက် ကျော်လွန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရန် အားထုတ်နေပါသည်။ ဟန်ချက်ညီသော လူနေမှုဘဝအတွက် အရည်အသွေးကို တန်ဖိုးထားသော ဧည့်သည်များသည် ထူးခြားသည့် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု၊ ဧည့်သည်အပေါ် စေ့စေ့စပ်စပ် အာရုံစိုက်မှုနှင့် လွန်စွာမှ သက်သောင့်သက်သာရှိလှသော ဇိမ်ခံတည်းခိုရာနေရာကို LOTTE HOTELS & RESORTS တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စကြောင့် လာရောက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ အပန်းဖြေရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဟိုတယ်များတွင် အာမခံထားသည့်အတိုင်း ဧည့်သည်များကို စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစွမ်းရန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း စုံစုံလင်လင် ပါရှိသလို ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ခန်းမများနှင့် ဘားများတွင် အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် လွန်စွာ လှပချိုမြိန်သည့် ညစာဧည့်ခံမှု အတွေ့အကြုံကို ရရှိသွားစေရန် ရွေးချယ်စရာများစွာကို စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ SIGNIEL၊ LOTTE Hotels၊ L7 နှင့် LOTTE City Hotels ပက်ကေ့ချ်များ အားလုံးအတွက် အထူး ပရိုမိုးရှင်းများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ပွဲအစီအစဉ်များနှင့် ဈေးနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှာဖွေလိုက်ပါ။